VaChamisa Vokurudzira Vanhu Kuti Vavhote neHuwandu Hwavo Kuti Kubiridzira Kunetse
Kurume 13, 2022
Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC VaNelson Chamisa vanoti bato ravo richakoshesa kuendesa masimba kumatunhu kuti munyika muve nebudiriro yakaenzana.
Zvisinei nekupisa kwakanyanya kwange kuchiita kunze, zviuru nezviuru zvevatsigiri vebato reCitizens’ Coalition for Change kana kuti CCC zvaungana munhandare muDulivhadzimu mudhorobha reBeitbridge kuti zvinzwe mutungamiri webato iri VaChamisa vachitura mashoko ekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemaby election.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change VaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vanyorese kuvhota kwete kuti vavhote musarudzo dzemaby election chete asi kuti musarudzo dzichaitwa munyika mose gore rinouya. VaChamisa vataura mashoko aya pamusangano nevatsigiri vavo kuBeitbridge.
Vati vanhu havafanirwe kuora moyo nekutyira kuti sarudzo dzichabirirwa vachiti vanhu vakavhota nehuwandu hwavo izvi hazviitike.
Sezvavari kugara vachitaura mazuvano VaChamisa vati vane chokwadi kuti bato ravo ndiro richatungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya.
Vati bato ravo rine gwara rakajeka rekuti nyika ibudirire vakati dhorobha reBeitbridge rakakoshera nyika nekuve kwaro pamuganhu zvekuti hupfumi hwaro hunofanirwa kusimukira kwete zvinhu zvose zvive zvinoitwa muguta reHarare
VaChamisa vati bato reZanu PF harichina chitsva charingati ringakwanisa kuita munyika mushure mekutungamira hurumende kwemakore makumi mana nemaviri. Vashorawo nyaya yemhirizhonga vakati kukwikwidzana mune zvematongerwe enyika kunofanira kuitwa murunyararo.
Nezuro VaChamisa vakatadza kuita musangano kuMarondera mushure mekurambidzwa nemapurisa zvichinzi bato ravo raive risina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa.
Asi VaChamisa vati havashore zvakaitwa nemapurisa vachiti vaiita zvavaive vatumwa.
VaChamisa vavimbisawo kuti kana bato ravo rave kutungamira hurumende vachadzora kushandiswa kwemari yekunze kusvika hupfumi hwenyika hwasimba zvekuti nyika inenge yave kukwanisa kuve nemari yayo.
Asi vachitaura pamusangano wekutsvagawo rutsigiro rwebato ravo reZanu PF munguva pfupi yapfuura muBulawayo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika variwo mutevedzeri webato, VaConstantino Chiwenga vakati hachisi chinhu chakanakira hupfumi hwenyika kuti hurumende ishandise mari yekunze.
VaAlexander Jekenya mutsigiri webato reCCC avo vati vari kugara muSouth Africa vati vanorwadziwa nekugara kunze kwenyika nekuda kwekuti nyika yawondomoka.
Mudunhu reBeitbridge muchaitwa sarudzo dzemaby election mumawadhi maviri. Sarudzo dzemaby election dzichaitwa munyika musi wa26 mwedzi uno.